यसकारण मानिसलाई डसेपछि मर्छ मौरी - Purbeli News
यसकारण मानिसलाई डसेपछि मर्छ मौरी
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १२, २०७८ समय: २१:०७:२४
काठमान्डाैं / तपाईंलाई मौरीले डसेको छ ? यदि डसेको छ भने थाहा होला मौरीले डसेपछि कति धेरै पीडा हुन्छ भनेर । मौरीले टोक्दा यसको खील हाम्रो शरीरमा गाडिन्छ र हामीलाई अति पीडा हुन्छ । तर के तपाईंलाई थाहा छ, डसेपछि मौरीको पनि मृत्यु हुन्छ ?
हामीलाई डसेपछि मौरी पनि बाँच्दैन । अर्थात्, डसेपछि मौरी पनि मर्छ । तर किन ? के मौरीको जीवन त्यसको खीलमा हुन्छ ? यस बारे चर्चा गरौं ।
विश्वमा सयौं प्रजातीका मौरीहरु पाइन्छ । सबै मौरी डसेपछि मर्दैनन् । मह बनाउने मौरी मात्र डसेपसि मर्ने गर्दछ । मौरीको पेटको पुछारमा खील हुन्छ । त्यसलाई ढाकेका अन्य अंगहरु पनि हुन्छन् ।
मौरीको त्यै खील अत्यन्तै संवेदशिल हुन्छ । किनभने मौरीले त्यही खीलले शत्रुलाई आक्रमर्ण गर्ने गर्दछ । साथै त्यहि खीलले मौरीलाई अण्डा पार्न मद्दत पनि गर्दछ । जो काँडा जस्तै कडा हुन्छ ।
मौरीको खील तीनवटा टुक्रा मिलेर बनेको नली जस्तो हुन्छ । मौरीले डस्दा, यसको तीखो खील बाहिरतिर धकेलिन्छ । त्यसैबेला, मौरीको विष ग्रन्थीबाट खील गाडिएकै घाउमा विष पनि पर्छ । फलस्वरुप, डसेको दुखाइ र विषको पोलाइ दुवैले डसिएको मान्छेलाई पीडा हुन्छ । तर त्यो पीडा मौरीको खीलले भन्दा पनि त्यसको विषले गर्दा हुन्छ ।
मौरीले डसेको खील गाडिएपछि सजिलै निस्कँदैन । फलतः जसै मौरी डसेर उड्न खोज्छ, त्यसको खील र त्यो जोडिएको अंग मौरीको जीउबाट चुडिन्छ र मौरी तत्कालै मर्छ ।
यता मौरीको खील हातले निकाल्न खोज्नु हुँदैन । किनभने, हातले निकाल्न खोज्दा त्यहाँ चुँडिएर रहेको मौरीको विष ग्रन्थी निचोरिएर झनै घाउमा जान सक्छ । त्यसैले, नंग काट्ने औजार वा अन्य त्यस्तै कुनै औजारहरुको मद्दतले मात्र त्यसलाई हटाउनु पर्दछ ।